Indlu yezivakashi ezimele, ezimele, ehlanzekile & ephephile ene-Patio enkulu - I-Airbnb
Indlu yezivakashi ezimele, ezimele, ehlanzekile & ephephile ene-Patio enkulu
Chandler, Arizona, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Karen & Brian
Konke okudingayo kulesi sikhala esihlanzeke kakhulu, esithokomele, nesiphephile. Itholakala kalula endaweni ephakeme, eduze nezitolo, izindawo zokudlela kanye nezitolo.Ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngesikebhe kanye negalofu kuyidrayivu emfushane. Ifakwe kahle ngayo yonke into oyidingayo ukuze uthole indlela yokuphumula: amalineni kanokusho, umenzi wekhofi nama-pods ekhofi, i-microwave, ifriji, umenzi weqhwa nezinsiza.Jabulela i-patio enkulu yangaphandle kanye ne-BBQ.
Sivumela izinja ezincane ngenkokhelo eyengeziwe engu-$25/ubusuku okufanele ikhokhwe kusengaphambili kanye nediphozithi engu-$50 ozoyithola uma uhlanza izilwane zakho.
Konke okudingayo kulesi sikhala esihlanzeke kakhulu, esithokomele, nesiphephile. Itholakala kalula endaweni ephakeme, eduze nezitolo, izindawo zokudlela kanye nezitolo.Ukuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngesikebhe kanye negalofu kuyidrayivu emfushane. Ifakwe kahle ngayo yonke into oyidingayo ukuze uthole indlela yokuphumula: amalineni kanokusho, umenzi wekhofi nama-pods ekhofi, i-microwave, ifriji, umenzi weqhwa nezinsiza…
“UKaren ungumuntu wangempela we-Phoenix. Uma ucabanga ngokuthutha, angasiza ekwenzeni kube lula. Uma ungathanda ukubheka amakhaya, sazise ngaphambi kokufika kwakho futhi sizokuhlelela wona! Indawo enhle kakhulu - iseduze nakho konke!”
“UKaren ungumuntu wangempela we-Phoenix. Uma ucabanga ngokuthutha, angasiza ekwenzeni kube lula. Uma ungathanda ukubheka amakhaya, sazise ngaphambi ko…
– Karen & Brian, umbungazi wakho
4.95 (izibuyekezo ezingu-199)
I-cul-de-sac ethule futhi ephephile etholakala eduze nomgwaqo onguthelawayeka u-202 (San Tan) futhi amamayela angu-2 kuphela ukusuka ezitolo nezindawo zokudlela ezithandwayo zedolobha laseChandler.
Ibanga ukusuka e- Phoenix Sky Harbor International Airport
Imizuzu engu-20 oyihamba ngemoto uma ukuminyana kwezimoto kungekho emgwaqeni
Ibungazwe ngu-Karen & Brian
I am a Phoenix area Realtor and flight attendant.
UKaren & Brian Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Chandler namaphethelo